Nkọwa:Ebube a na-enwu maka Ụlọikpe Nkata,Ụlọ ọkụ na-agba n'èzí n'èzí,Ụlọ Egwuregwu Bọl na-apụta n'èzí
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu n&#39;èzí > 600W Na-aga n&#39;èzí bọmbụ ọkụ ọkụ
A na-eji ọkụ eletrik 600 a na-ahụ maka Ụlọ Egwuregwu Bọọlụ Na- apụta n'èzí na -eme ka ibe ya dị mma, enweghị ihe ọhụụ, onyinyo-enweghị nnyefe, na-enye ìhè dị ọkụ. Ụlọ Egwuregwu Egwuregwu Ngwá Egwuregwu Ọhụụ anyị na-egbuke egbuke na mkpuchi elu ruo 10KV, na-edebe ndị mmadụ na ihe onwunwe ndị ọzọ n'ihe ize ndụ. The 600w N'èzí Nkata Court Dugara Lighting bụ IP65 Waterproof, nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma na mmiri ozuzo, mkpurummiri, snow, Adabara ma ime ụlọ na n'èzí ọkụ ke ọ bụla ihu igwe. Egwuregwu ọkụ elekere 600 dị ezigbo mma maka 2000W Halogen Bulb Equivalent, chekwaa ihe karịrị pasent 80 na ụgwọ eletrik gị. Ntube ume iku ume nke puru iche, nwere ike idozi ntanetị nke ime egwuregwu a ahụ iji hụ na ihe karịrị 50000 elekere.
Ìhè Na-enwu enwu na mpụga mgbachapụ ọkụ dị 400 Watt Kpọtụrụ ugbu a
Ebube a na-enwu maka Ụlọikpe Nkata Ụlọ ọkụ na-agba n'èzí n'èzí Ụlọ Egwuregwu Bọl na-apụta n'èzí Ebube a na-enwu maka Ụlọikpe Tennis Ebube na-enwu maka ụlọ ụlọ Ebube na-enwu enwu maka Stadium Eluigwe na-enwu ụlọ Ebube Ndị Na-ahụ Maka Ụlọ Ahịa